Mepụta ụlọ ọrụ na OEM / nke ọma Bandfre etemeete
Banffee etemeete - Ọkachamara Ime Up Factory& Onye nrụpụta ihe ịchọ mma ahaziri iche
Ndị otu Banffee
Ebili ewu ewu
Na-egbochi egbugbere ọnụ
Anya na-eteta ngwaahịa
Shimmer / na-egbuke egbukeshadow
Ihu Ngwa Ngwa
Ntọala ntụ ntụ
Kwụsịnụ na-enwe gị Mma
]Ka Banffee Makeup Agbasaruo Iji n'akụkụ ọ bụla nke World! Anyị bụ ndị ọkachamara OEM & ODM ntecha Manufacturer.
Banffee Makeup bụ ọkachamaraeme ka elu factory na ịchọ mma ngwaahịa emeputa ke China nile di iche iche nke anya ntecha, ihu ntecha na egbugbere ọnụ ntecha. Anyị isi ngwaahịa na-agụnye lipstick, eyeshadow palettes, eyeliners, ntọala, enwe ntụ ntụ, Highlighter& bronzer, wdg
Banffee Makeup bụ N'ogbe ntecha emepụta na nwere onwe anyị ika ntecha maka N'ogbe na-enye OEM / ODM ọrụ.
Anyị bụ ndị ọkachamara OEM& ODM etemeete emeputa, Nke tent nchọpụta na mmepe, mmepụta na ahịa na otu. Anyị nwetara aha ọma n'ihi anyị elu ngwá, ọkachamara ahịa otu, ike R& D otu n'ihi na ihe karịrị 10 afọ, kpọbata nke ngwaọrụ si n'ụwa nile. Banffee Makeup enye ọkachamara omenala serivce nile di iche iche nke ihe ntecha na ngwaahịa. Ọ bụrụ na ị na-achọ ihe ntecha OEM emeputa, kpọtụrụ anyị.
ase:Ahịa agwa chọrọ ụdị ihe na-akpata, arụmọrụ nkọwa, ndụ okirikiri, na nnabata chọrọ.
chepụta: The imewe otu na-agụnye site na mmalite nke a oru ngo iji hụ na kacha mma omenala e ngwaahịa na uwe ahịa 'mkpa.
Quality Management: Iji na-enye elu àgwà owuwu, anyị ịnọgide na-enwe ihe irè& oru oma Quality Management System.
ahaziri UGBU A
Banffee Makeup enye onye-nkwụsị ngwọta maka mmalite-elu etemeete ụdị: zuru usoro nke customization ọrụ ndị dị ka ika imewe, ngwaahịa nkwakọ imewe, ika ahịa ìgwè mmadụ n'ọnọdu analysis, ngwaahịa mmepe na mmepụta, ngwaahịa ahịa ọzụzụ, wdg
Dị ka a anam elu factory / emeputa na 16 afọ, Banffee Makeup bụ ike inye elu àgwà ntecha na asọmpi price.
16 afọ ahụmahụ
The ngwaahịa na-abụghị nanị mfọn anụ ụlọ na-eji ọkụ, ma na-exported ka Southeast Asia, Middle East, Africa, EA ...
Anyị nwetara aha ọma n'ihi anyị elu ngwá, ọkachamara ahịa otu.
Banffee nwere ike inye ahaziri usoro, ahaziri nchịkọta, free imewe, mbupu ọrụ na-mgbe-sales Servic ...
Ịta free& vegan
roduct usoro-agụnye eyeshadow, lipstick, lipgloss, egbugbere ọnụ balm, nkuanya, eyeliner, mascara, ntọala, Highlighter, c ...
Guangzhou Banffee Ntecha Co., Ltd. e guzobere na 2015. Ya headquarter na R&D base dị na Jianggao Town Industrial Park, Baiyun District, Guangzhou City, nke nwere gburugburu ọdịbendị bara ụba. Ụlọ ọrụ na-elekwasị anya na mmepe, imewe, mmepụta, ahịa na ọkọnọ yinye nke elu-tech ịchọ mma, a integrated make up factory na ahaziri ịchọ mma emeputa.
Mgbe 7 afọ mmepe, Banffee etemeete enwetala ISO22716, GMP, SGS, FDA certifications, na nwere oru nyocha na mmepe otu, nnukwu-ọnụ ọgụgụ GMPC mmepụta ogbako, oge a n'ụzọ zuru ezu akpaka mmepụta ngwá, na mba ọkọnọ. yinye nke mbubata akụrụngwa. Ugbu a, ọ bụrụla ụlọ ọrụ ngwaahịa etemeete ama ama na ụlọ ọrụ ịchọ mma, pụta akara nke ya KILLFE. Ọ bụrụ na ị na-achọ ọkachamara na a pụrụ ịdabere na-eme ka ụlọ ọrụ mmepụta ihe / OEM ịchọ mma emepụta, welcome ịkpọtụrụ anyị.
Afọ 16 nke ahụmahụ na mpaghara ịchọ mma.
Ụlọ ọrụ kwadoro nwere ọtụtụ asambodo.
Ọrụ nkwụsịtụ maka ndị ahịa anyị.
Nke a bụ akụkọ kachasị ọhụrụ gbasara ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ anyị. Gụọ posts ndị a ka ị nweta ozi ndị ọzọ gbasara ngwaahịa na ụlọ ọrụ ma si otú ahụ nweta mkpali maka ọrụ gị. Anyị kwenyesiri ike na anyị ga-amụtarịrị na akpụkpọ ahụ dị mma nwere ike nweta ọtụtụ ihe ị na-echetụbeghị na ị ga-emeli.
]Palettes ncha anya ezumike kacha elu na Banffee etemeete
]Ọdịiche dị ịtụnanya nke palettes eyeshadow ezumike na Banffee. Ewezuga ọmarịcha agba na ndo, enwere ọtụtụ...
]Banffee ngwaahịa ọhụrụ
]——N'ịgbaso ngwaahịa nlekọta anụ ahụ bụ isi, Banffee wepụtara ngwaahịa isi ihe eji eme ọtụtụ ihe iji gbasaa ahịrị ngwaahịa dị...
]Mpempe egbugbere ọnụ dị ọcha - idobe egbugbere ọnụ gị ka ọ ghara ịdị mma ụbọchị niile
]Dị ka ngwaahịa etemeete ọ bụla, egbugbere ọnụ doro anya na-eme ka ndụ dịkwuo mfe. Kedu uru ya na kedu ka o si egbochi smudgi...
]Uru Eke egbugbere ọnụ na-egbuke egbuke na otu esi ahọrọ egbugbere ọnụ kacha mma
]#Egbugbere ọnụ egbugbere ọnụ kacha mma bụ ezigbo ọgwụgwọ maka egbugbere ọnụ mmadụ gbawara agbawa na gbajiri agbaji. Pịa ebe a ka ịmata ka ha si baa uru...
]Ebe a ga-etinye Highlighter na ihu?
]Nzọụkwụ site na ebe ị ga-etinye highlighter n'ihu ma tinye ihe ngosi ahụ ka ọ dị mma n'egedege ihu gị, ntì, na imi gị ...
]Kedu lipstick kacha mma maka ojiji kwa ụbọchị?
Hey, ka anyị na-akpakọrịta!
Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla gbasara ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ anyị,
nweere onwe gị ịkpọtụrụ ndị otu ọrụ ndị ahịa.
Otu anyị si eme ya zute ma kọwaa Global
Ihe mbụ anyị na-eme bụ izute ndị ahịa anyị ma na-ekwurịta ihe mgbaru ọsọ ha na ọrụ n'ọdịnihu.
Guangzhou Banffee ịchọ mma Co., Ltd. e guzobere na 2015. Anyị na-elekwasị anya na mmepe, imewe, mmepụta, ahịa na ọkọnọ nke ihe ịchọ mma dị elu.
Nwee obi ike ịkpọtụrụ anyị
Adreesị: Ụlọ 307, Ụlọ 4, No. 4, Greenland Airport Center, Huadu District, Guangzhou